News - HDPE suunka birta oo la xoojiyay dalabka suuqa biibiile jiingado ah
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la ilaalinayo siyaasadaha ilaalinta qaran ee tamarta iyo yareynta qiiqa iyo diiradda caalamiga ah ee ku saabsan dhaqaalaha kaarboonka yar, iyo sidoo kale hagaajinta tayada nolosha dadka, dadku waxay fiiro gaar ah u siiyeen tayada nolosha guriga. Maaddaama ay tahay nooc cusub oo ah tuubbada bullaacadaha, biibiileyaasha bullaacadaha PE iyo suunka HDPE ee birta ah oo la xoojiyay dhuumaha jiingado ee muquuninta ah ayaa waxaa mar soo dhoweeyay shirkadaha waaweyn ee bulaacadaha sida warshadaha waraaqaha.
PE biibiile bullaacadda, HDPE suunka steel xoojiyay muquuninta jiingado muquuninta, waxqabadka socodka fiican, kala duwan qulqulka ballaaran iyo sifooyinka kale polymer gaar ah, sidaa darteed biibiile PE uu leeyahay waxqabadka processing heer sare ah. Warshadaha caaga ah ee Xinqihang waxay leedahay habab fara badan oo lagu sameeyo tuubooyin biyo mareeno ah, sida wax isku xoqida duritaanka, wax isbadal ku sameysmo, termoforming vacuum, daahan, wax u qabashada wareega, xumbada electroplating, ku xereenka biraha, iwm. alaabada derbiga leh iyo kuwa u baahan adkeyn. Qalabka xawaaraha sare waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo dariiqyo khafiif ah iyo alaabooyin u baahan in si dhakhso leh wax looga qabto.
Si loo buuxiyo shuruudaha sare ee nidaamyada bullaacadaha ganacsiga, oo ay ku jiraan caabbinta cadaadiska, nabadgelyada, iyo aamusnaanta, waxaa soo muuqday dhuumaha bullaacadaha PE-dhexroor weyn. Tuubooyinka PE waxay beddeleen tuubooyinkii birta ee asalka ahaa iyo tuubooyinkii shubka ahaa. Maaddaama darbiga hoose ee tuubbada bullaacadda ee ballac-ballaadhan ee PE ay siman tahay, sidoo kale waa mid xoog leh inta lagu jiro rakibidda, mana soo saari doonto joodh weyn oo lagu kordhiyo dhererka saafiga ah ee gudaha. Intaa waxaa dheer, qiimaha dhuumaha bullaacadaha PE-dhexroor-weyn ma aha mid aad u sarreeya, sidaas darteed hoos u dhigaysa kharashka mashruuca oo dhan.
Gudaha iyo dibedda tuubada bullaacadaha ee PE waxay ka samaysan tahay "cagaar" maaddooyinka PE ee aan sunta ahayn, oo aan saamayn ku yeelan doonin deegaanka ku xeeran. Dhuumaha bulaacada ee PE waxay si wax ku ool ah u yareeyaan buuqa bullaacadaha waxayna abuuraan jawi wax soo saar aad u raaxo badan. Caabbinta socodka waa yar tahay si looga hortago wasakhda loona hubiyo dheecaan hufan oo habsami leh. Waxyaabaha loo yaqaan 'polyetylenne PE' wuxuu leeyahay derbi gudaha ka siman oo waxaa loo isticmaali karaa in lagu sii daayo dareeraha PH2-PH12. Saamaynta xiritaanka ayaa aad u wanaagsan, mana jirto suurogal in baxsi yimaado.